Diego Simeone Oo Ugu Danbayn Kala Cadeeyay Hadaladii Muranka Dhaliyay Ee WhatsApp-ka Ee Uu Koobkii Aduunka Kaga Hadlay Cristiano Ronaldo & Lionel Messi. - GoolTV.Net
Tababaraha kooxda Atlético Madrid ee Diego Simeone ayaa markii ugu horaysay saxaafada ka hor cadeeyay hadaladii codka ahaa ee intii uu koobka aduunku socday uu kaga hadlay isbarbar dhigii uu ku sameeyay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi kaas oo muran abuuray isla markaana aan hore isaga wax looga waydiin.
Cod uu Simeone u diray caawiyihiisa Atletico Madrid ee Germán Burgos ayuu ku waydiiyay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo midka uu dooran lahaa haddii ay u ciyaarayaan kooxo ciyaartoy meel dhexaad ah haysta laakiin codkaas ayaa si qarsoodi ah uga baxay WhatsApp-ka wuxuuna galay saxaafada.
Arintan ayaa muran abuurtay waxaana loo fasirtay in Diego Simeone uu Cristiano Ronaldo ka doortay Lionel Messi laakiin waxa uu sharaxaad ka bixiyay ujeedadii uu hadalkan ka lahaa isaga oo xusay in aanu marnaba ka shaki sanayn tayada Lionel Messi isla markaana uu yahay kan aduunka ugu fiican.
Diego Simeone ayaa xaalada codkiisii koobka aduunka ka soo baxay WhatsApp-ka waxa uu sharaxaad hadda kaga bixiyay shirkiisa jaraa’id ee ka horeeyay kulanka ay Atletico Madrid isniinta la ciyaarayso kooxda Paris Saint-Germain kaas oo ka dhici doona Singapore.
Diego Simeone oo arintii muranka dhalisay ee Messi iyo Ronaldo ka jawaabaya ayaa yidhi: “Anigu markasta Messi ayaan shaki la’aan uga doortaa Ronaldo. Markii aan sheegay wixii aan ku sameeyay Messi iyo Ronaldo, anigu kamaan hadlayn midka ah ciyaartoyga aduunka ugu fiican”.
Diego Simeone oo sii sharaxaya hadalkiisa ayaa yidhi: “Waxaan shegayay in kooxda ay ciyaartoy meel dhexaad ahi joogaan in ugu dhawaan uu Ronaldo kaga haboonaan lahaa, laakiin marka ay ciyaartoy sare ay ku xeeran yihiin Messi ayaa ah kan aduunka ugu fiican”.
Diego Simeone ayaa ku dooday in codkii WhatsApp-ka ee uu caawiyihiisa u diray kaas oo saxaafadu ay heshay in aanu ahayn mid uu kaga hadlayay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo midka ah ka aduunka ugu fiican balse uu ku qiimaynayay xaaladaha ay ku kala fiican yihiin hadii la dhigo.
Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa fashil kala soo laabtay koobkii aduunka iyaga oo aan xulalkooda dhaafin wareegii 16ka ee koobka aduunka waxayna taasi sabab u noqotay in markii ugu horaysay tan iyo 2007 kii wixii ka danbeeyay in abaal marinta xidiga sanadka ugu fiicani ay noqotay mid si buuxda u furan.